Ukucubungula okuphezulu okufakwe nge-Metallized Ceramic Insulator China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > I-metallized ceramics > Metallized Ceramic Insulator > Ukucubungula okuphezulu okufakwe nge-Metallized Ceramic Insulator
I-metallized ceramic insulator idlala indima ebaluleke kakhulu kumadivaysi amaningi ahlanzekile ahlukene ngenxa yezinto zabo eziphawulekayo kagesi, izishintshi nezishisayo. Siyakwazi ukukhiqiza izinhlobonhlobo zamakhemikhali e-ceramic ahlukahlukene ngokwezifiso zomdwebo noma ukucaciswa kwamakhasimende, njenge-tube ensimbi ye-ceramic, i-substrate yensimbi yensimbi, izitifiketi ze-ceramic zensimbi, izindandatho ze-ceramic zensimbi njalonjalo.
Sinikeza ukhetho lwezinhlobo zensimbi ye-metalli ukuhlangabezana nezidingo ezahlukene ezivela kumakhasimende ahlukene, izinhlobo eziyinhloko zensimbi zenziwe njengezilandelayo:
1. Umzimba we-ceramic + wesiliva .......................................... .................................................. 2. Umzimba we-ceramic + we-shayela
3. Umzimba we-ceramic + We-Plating we-Tin .......................................... .................................................. ... 4. I-Raw body body + Mo / Mn metallization
5. Umzimba we-ceramic body + Mo / Mn (W) metallization + i-nickel plating ................................. 6 Umzimba oqoshiwe we-ceramic + W ukwesekwa kwe-metallization + yegolide
Siyakwazi ukuhlinzekela ukuhlukahluka kwesigaba se-ceramic ensimbi kusuka ekubekezeleleni okujwayelekile kuya ekugqeni okuphezulu ngokugaya okuhle, ukuchithwa kwe-CNC, njll. Futhi, singanikeza isevisi ye-prototyping nge-batch encane kakhulu.
● Amandla aphezulu okubopha / amabhande ● Izinga lokuvuza okuphansi ● Amandla aphezulu okuQinisa ● Amandla aphezulu asebenzayo ● Ukwanda okuphansi okushisa
● Ukumelana nokuqothula ngaphandle kokugqwala ● Min. ukumelana kagesi kanye nokuqina kwe-vacuum
Isetshenziswa kakhulu kumshini wokuphazamisa umshini wokushisa, ama-capacitors ahlanzekile / ama-Thyristors, amashubhu wegridi yamandla, ama-tubes ahamba phambili, ithrekhi yokubamba iqhaza nokunye okunye.
Sinezindlu eziningi zokukhiqiza imishini yokwenza izakhi ze-ceramics ezakhiwe nge-shaping to electroplating. Kusisiza ukuba senze kahle kakhulu. Futhi, ukusisiza ukuba sinikeze intengo yokuncintisana.